Isixhobo somoya I-KALORIK TKG ACM 1007 - uphononongo | Zonke.pl
Isixhobo somoya I-KALORIK TKG ACM 1007 - uphononongo
Izimvo eziyi-1.15K 1 Julayi 2020 izimvoiikhalori air conditioner uphononongo lomoya isixhobo sokuphatha umoya izixhobo zokuphatha umoya
mariush (undwendwe)	 27 Juni 2020 0 Izimvo
Ihlobo elishushu lisondela ngokukhawuleza. Lilonke, bekuqhubeka iiveki ezi-2, kodwa iya kuba nkulu ngakumbi. Ndikhangela isixhobo somoya esinexabiso eliphantsi endlini yam.
I-KALORIK TKG ACM 1007 ye-air conditioner ixabisa malunga ne-PLN 1400, ayinkulu kakhulu. Unomqhubi wenqwelomoya. Ngaba ukhona kuni oyisebenzisayo? Ngaba wanelisekile ngayo? Ngaba ipholisa igumbi kakuhle?
imali uphendule umbuzo 1 Julayi 2020
Zonke8.16K Yongezwe: Nge-27 kaJuni ka-2020
Uandrew (undwendwe)	 Kuthunyelwe ngoJulayi 1, 2020	 0 Izimvo
Phendula ku: Isixhobo somoya I-KALORIK TKG ACM 1007 - uphononongo
Isixhobo somoya sisebenza kakuhle kakhulu. Kupholisa igumbi lethu lokulala ngaphambi kokuba ulale ngaphandle kwengxaki. Siyicimile ebusuku.
Ngamanye amaxesha siyayincamathisela emini esalon. Sicinga ukuba ukuthengwa kuphumelele.
Andrew uphendule umbuzo 1 Julayi 2020
Zonke8.16K Yongezwe: Nge-1 kaJulayi ngo-2020
Jonga amangeniso afana ne Isixhobo somoya I-KALORIK TKG ACM 1007 - uphononongo
Isixhobo somoya ophathwayo IKALORIK TKG ACM 1008 - uphononongo
I-KALORIK ACM1010 isixhobo sokupholisa umoya - uphononongo
Ngaba ngumsonto Isixhobo somoya I-KALORIK TKG ACM 1007 - uphononongo Ngaba iyakuchaphazela, inkampani yakho, ukuzala, imveliso okanye elinye ishishini?
Apho ukuya ngaselwandle eFrance ebusika?
Ngaba usebenza njengamavolontiya?